Igundane elihamba phambili le-COD lempi yanamuhla (2020) - Ukudlala
Impi yesimanjemanje idlalwa kakhulu emhlabeni womsebenzi. Ingeze i-Gameplay eningi eyingqayizivele futhi iyajabulisa kwiCod. Iza nezinhlelo ezinkulu ezibandakanya ukubulala, abakhandi bezibhamu, amasistimu wokudala, nezinye izinto eziningi okufanele uzilawule ngesikhathi sokudlala. Ukufeza ileveli yomsindo empini yanamuhla yeCod, kufanele ube nohlobo oluhle kakhulu lwegundane. Njengoba ungahle ube yingcweti kuwo wonke amathiphu namakhono wokuwina umdlalo wakho, kepha ungahle usale ngenxa yempendulo yakho yegundane enganele. Kulesi sihloko, sizokusiza ngekholi engcono kakhulu yegundane lomsebenzi wezimpi zesimanje ukuze ukwazi ukucubungula wonke amakhono akho.
Igundane lesimanjemanje sethulwe ngezinkinobho ezengeziwe zokuchofoza ukulawula imidlalo yakho yesimanje, futhi ikusiza ukuthi uzijwayeze kahle ngezimpendulo ezisheshayo. Inikeza umdlali isenzo esisheshayo esimenza umdlali wohlobo lwe-pro futhi engeza amathuba amaningi wokuwina. Ngakho-ke, nge-Gameplay efanele futhi esebenza kahle, kufanele uye kwigundane lesimanje nelifakwe kabanzi ukuze ungeze ulwazi olubanzi kumdlalo wakho osuvele uthokozisa futhi uyajabulisa.
Igundane elihamba phambili le-COD Mouse yempi yanamuhla - Uhlu oluphezulu olungu-5
Sizokunikeza imininingwane esheshayo ngamanye amagundane wesimanje asezingeni eliphakeme ukukusiza ekwenzeni ukuthenga kwakho kungabi namandla ku-Call of Duty Modern Warfare.
1. ILOGITECH G502 PROTEUS SPECTRUM RGB
Kubhekwa njengegundane elihle kakhulu lokudlala impi yeCod Modern. Sibala lapha ezinye zezici zayo ezibalulekile ezizokuqinisekisa ukuthi uyithengile.
Izinkinobho ezihlelwe nge-E11.
Isisindo esingu-3.6 amagremu.
Imibala eguquguqukayo ukufanisa imibala yekhibhodi yakho noma i-PC.
Kuthuthukiswe isondo lokuskrola.
Inikeza abasebenzisi ukubamba okunethezekile nokushelelayo.
Izici zayo zihlangana zikwenze kube ukukhetha okukhethwa kukho kwabadlali abaningi bamaCod empi yanamuhla.
2. ILOGITECH G903 ILAYISWE NGOKUKHANYA
Kube elinye lamagundane athengiswa kakhulu akhiqizwa yilolu hlobo. Okulandelayo izici ezishukumisayo ezibalulekile ezingakugqugquzela ukuthi uzenzele.
Inzwa engu-12,000 ye-DPI
Uhlelo lokushaja lwe-Powerplay.
Inzwa ye-Hero 16K.
Leli gundane luhlobo oluhle kakhulu lwegundane lekhwalithi esezingeni eliphakeme ongalithola egundaneni elingenantambo. Into enhle ngaleli gundane ukuthi awusoze wakhathazeka ngokushaja kwalo njengoba likwazi ukushaja noma lisetshenziswa.
3.I-Razer Death Adder v2 Igundane Lokudlala
Kube enye yegundane lokudlala elithengisa kakhulu. Okulandelayo izici ezibalulekile ezizodonsa ukunaka kwakho.
Inombani we-chroma RGB owenziwe ngokwezifiso.
Inezinkinobho eziyisishiyagalombili ezihleliwe ezivumela umdlali aphendule ngokushesha.
Inezinzwa ze-20K DPI optical.
Inezintambo ze-razer speed flex.
Kungaba inketho enhle kakhulu kuwe uma ufuna ukuba negundane elingasindi elinezici ezinhle kakhulu ukwenza isipiliyoni sakho sokudlala sithokozise futhi sibushelelezi.
4. URazer Naga Hex V2
Ingenye yegundane elinamagama athengisa kakhulu ngokudlala impi yesimanje ye-CoD. Izici ezibalulekile zizoqinisekisa isilinganiso sayo esiphezulu.
Inenzwa ye-5G optical.
Kuyinto customizable kakhulu.
Inezinkinobho eziyishumi nambili zokumisa.
Inani elikhulu lezinkinobho eziyishumi nesishiyagalolunye ezihlelwe ngokuphelele.
Kungenzeka ukuthi usibonile isici sayo esimangalisayo sezinkinobho ezikusebenzela ngempendulo enhle kakhulu yokudlala. Kufanele uwuthole lo mkhiqizo uma ufuna ukuba ngumdlali ophambili ocingweni lomsebenzi wanamuhla wempi.
5.I-SteelSeries Rival 710 Igundane Lokudlala
Phakathi kwelinye igundane elidume kakhulu le-Call of Duty le nsimbi ye-SteelSeries Rival 710 Gaming Mouse nayo yenze indawo yayo ekhethekile futhi ingasetshenziselwa izinhloso zemidlalo eminingi kufaka phakathi iCall of Duty Modern Warfare. Ngezansi kunezici ezigqama kakhulu zaleli gundane;
Inesici sezixwayiso ezicwilisayo
Kungani Ufuna Igundane Lokugembula?
Yize izwe lokudlala seliqale ukuthembela kakhulu kubalawuli begeyimu, kufanele wazi ukuthi isilawuli segeyimu asikwazi ukushaya ukusebenza kahle nokuphendula okusheshayo kwegundane. Akulula ukujwayela igundane ekuqaleni, kodwa uma usujwayele igundane, uthola ukulawula okuyimpumelelo kakhulu kwegeyimu yakho.
Kufanele utshale imali ngegundane lekhwalithi ezwakalayo ngokudlala ikholi yomsebenzi ngoba izokhiqiza ukusebenza kwakho ngaphandle kokungabaza. Igundane elingcono nelesimanje likuqinisekisa ukuthi uzuze ekukhiqizeni igeyimu.
Uma ufuna ukuthola ulwazi oluhle kakhulu nolusebenzayo lwe-Call of Duty Modern Warfare yakho, kuzofanela ucabange ukutshala imali enhle egundaneni lesimanje ukukusiza ekuqhubekeni wonke amakhono akho ku-gameplay yakho.
Lo mbhalo ongenhla uphinde wakhuluma ngemikhiqizo emibili engcono kakhulu yegundane ukukusiza ngokuthenga okungenamsebenzi nokusebenza kahle kwempi yeCod Modern.
I-FMovies New Website 2020 - Singawabuka Ama-Movie Kule?
ama-movie wamahhala ayikho i-akhawunti edingekayo
ungayibona kanjani i-airpods yamanga pro
isidlali esihle kakhulu i-movie ephelele mahhala
roblox ukuthi uyisebenzisa kanjani ikhodi
izingosi zama-movie zamahhala zamafoni